अस्पताल गुहार्दा-गुहार्दै जान्छ सुत्केरीको ज्यान – देशसञ्चार
स्टेचरमा बोकेर स्वास्थ्य संस्था लैजाँदै।
भरपर्दाे छैन कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा
अस्पताल गुहार्दा-गुहार्दै जान्छ सुत्केरीको ज्यान
डिलप्रसाद शर्मा चैत्र ७, २०७५
गत असार ५ गते दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं. ५ पिपलकोट तोलीचाखाकी कृष्णा कसेरालाई सुत्केरी व्यथा लाग्यो। लामो समय व्यथा लागेकाले उनको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक थियो।
अस्पताल पुर्‍याएर ज्यान जोगाइदिन कृष्णाले गुहार मागेकी थिइन्। तर, स्वास्थ्य चौकी पुगेर ज्यान जोगाउने कृष्णाको चाहाना पुरा हुन सकेन्, बाटोमै जन्मिएका शिशु र कृष्णा दुवैको मृत्यु भयो। १५ वर्षकै उमेरमा आमा बन्‍न लागेकी उनले स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै गर्दा बाटोमै ज्यान गुमाउनु पर्‍यो। नियमित स्वास्थ्य चेकअपमा आउँदा आमाको उचाइ र तौल एकदमै कम अर्थात ४३ केजी मात्र थियो।
कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका-७ की २० वर्षीया मीना शाहीको गत शनिबार मृत्यु भयो। शुक्रबार राति घरमै सुत्केरी भएकी उनलाई थप उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल ल्याइएको थियो। घरमै सुत्केरी भएकी उनले मृत शिशु जन्माइन्। बच्चा जन्मेपनि साल निस्कन नसक्दा बेहोस भएपछि मीनाको सामान्य उपचार जिल्ला अस्पताल कालिकोटमा गरियो।
जिल्ला अस्पताल कालिकोटका प्रमुख डा. भीष्म पोखरेलका अनुसार बिरामीको अवस्था गम्भीर भएकाले कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा रिफर गरिएको थियो। कृष्णाले जस्तै ज्यान जोगाइदिन मीनाले गरेको बिलौना पनि कम थिएन। मीनाको बिलौनाको सुनुवाई भएन्, अर्थात् उनको बाच्ने चाहना पुरा हुन सकेन। प्रदेश अस्पताल ल्याउने क्रममा उनको मृत्यु भयो।
एम्वुलेन्स नहुँदा विरामीलाई डोकोमा बोकेर अस्पताल लैजाँदै।
कालिकोटमा सुत्केरीको मृत्युको घटना सेलाउँन नपाउँदै गत शनिबार दैलेखको आठबीस नगरपालिका वडा नं. ५ की पवित्रा चौलागाई निकै जोखिम मोलेर सुत्केरी भइन्। पवित्रालाई घरमा सुत्केरी व्यथाले च्यापेको थियो। तीन दिन लामो सुत्केरी व्यथा लागेकी उनलाई राकम कर्णाली स्वास्थ्य चौकीले शनिबार नै सुर्खेत लैजान भनेर रिफर गरेको थियो। तर, आठबीसमा रहेका दुई ओटा एम्बुलेन्स मध्ये सात्तालाको एम्बुलेन्स बिग्रेका छन्। सिंगौडीको एम्बुलेन्स नेपालगञ्जमा रहेका कारण समयमै सुत्केरीको उद्धार भएन्।
थप उपचारका लागि वीरेन्द्रनगर ल्याउन सक्ने अवस्था नभएपछि बीचबाटोमै हातले बच्चा झिकेर सुत्केरी गराइयो। ‘जोखिमपूर्ण अवस्थामा सुत्केरी हुँदा बच्चालाई जोगाउन सकिएन’, आठबीस नगरपालिका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष मुक्तिप्रसाद उपाध्यायले भने,‘आमाको ज्यान खतरामा भएकाले घरमै हातले बच्चा तानियो।’ समयमा अस्पतालसम्म पुर्‍याउने भरपर्दाे साधन नहुँदा सुरक्षित रुपमा उनी सुत्केरी हुन सकिनन्। जसकारण चौलागाइँले बच्चा गुमाउनु पर्‍यो।
भरपर्दाे स्वास्थ्य सेवा र पहुँच नभएको कर्णालीमा विरामीले भगवानकै भरोसामा बाच्नुपर्ने बाध्यता छ। गर्भवती तथा सुत्केरी महिला, नवजात शिशुको स्वास्थ्य दिनहुँ जोखिममा पर्ने गरेको छ। भरपर्दाे र समयमा उपचार नपाएका कारण कृष्णा, मिना जस्ता सुत्केरीहरुले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ भने पवित्रा जस्ता थुप्रै महिलाले नवजात शिशु गुमाउनु परेको छ।
कर्णालीका दश जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा १३ जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भयो। यस्तै, आव २०७३/०७४ मा १८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने आ.व. २०७४/०७५ मा ३७ जना सुत्केरीले अकालमा ज्यान गुमाएको तथ्यांक कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयसँग छ। उल्लेखित तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको असुरक्षित अवस्था दर्शाउँछ।
स्वास्थ्य सुविधा गुणस्तर नभएका कारण कर्णाली प्रदेशमा मातृमृत्युदर बढ्दै गएको छ। विगत तीन वर्षको तथ्यांक हेर्दा कर्णालीका सुत्केरी असुरक्षित छन्। कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार पछिल्लो समयमा मातृमृत्युदर बढ्दै गएको हो। घरमै सुत्केरी हुनाले पनि आमाहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने गरेको छ। तर स्वास्थ्य संस्थामा पुगेका सुत्केरीको मृत्यु पनि बढ्दो छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा समुदायमा सुत्केरी हुने १२ जना र अस्पतालमा ६ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। यस्तै, गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ३२ जना सुत्केरीको समुदायमा मृत्यु भएको छ। यो विगतका वर्षको तुलनामा अस्वभाविक रूपमा बढेको मृत्युदर हो। स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा पुगेका ५ जना सुत्केरीहरूले ज्यान गुमाएका छन्।
विगत तीन वर्षको अभिलेख अनुसार दैलेख, कालिकोट, मुगु र जाजरकोटमा अधिकांश सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। सुत्केरीको मृत्यु हुनेदर समुदायमा नै बढी रहेको छ। समुदायमा सुत्केरीको स्वास्थ्योपचार नपाएकै कारण मृत्यु हुने गरेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
अभिलेखअनुसार आ.व. २०७२/०७३ मा डोल्पामा २, मुगुमा १, हुम्लामा २, जुम्लामा १, दैलेख र सुर्खेतमा ३÷३, सल्यानमा १ जना सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। यस्तै, आ.व. ०७३/०७४ मा कालिकोटमा ५, दैलेखमा ६, जाजरकोटमा ४ र सुर्खेतमा ३ जना सुत्केरीले भरपर्दाे उपचार नपाएरै अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। आव ०७४/०७५ मा मुगु र जाजरकोट जिल्लामा १०/१० जना सुत्केरीको मृत्यु भएको छ। डोल्पामा २, हुम्लामा १, कालिकोटमा ४, दैलेख र रुकुममा १/१ र सुर्खेतमा ८ जना सुत्केरीको अकालमा मृत्यु भएको छ।
कर्णालीमा मातृमृत्युदर, स्रोत: प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेत।
सुत्केरीको अवस्था नाजुक भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था लैजाने प्रवृतिका कारण कर्णालीमा स्वास्थ्य संस्थामा ल्याएपनि मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक देखिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका तथ्यांक अधिकृत विनोद आचार्यले बताए।
गरिब तथा विपन्न प्रदेशको उपमा पाएको यस प्रदेशका महिलाहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नपाएका कारण नै जोखिममा छन्। स्वास्थ्य संस्थासम्म सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाहरूको सहज पहुँच छैन। जसले उनीअरु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले निकै असुरक्षित छन्। वर्षेनी सुत्केरी र गर्भवति महिला समयमा उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएकाले पनि यहाँका महिलाहरूको स्वास्थ्य संस्थासम्म सहज पहुँच छैन। समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउँदा बीचबाटोमा ज्यान जाने गरेको छ।
कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था भएपनि उपयुक्त प्रविधि र गुणस्तरीय सेवा पुग्न सकेको छैन। जिल्ला अस्पतालले समेत उपचारका लागि रिफर गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रविधि, जनशक्ति र उपकरण अभावका कारण ग्रामिण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा भरपर्दो छैन। जसले गर्दा जिल्ला तहका अस्पतालबाट बाह्य जिल्ला पठाउनु परेको छ।
कर्णालीका हिमाली जिल्ला डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला, मुगुबाट सुत्केरीलाई थप उपचारका लागि लाखौं खर्चेर कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, काठमाडौं, नेपालगञ्जसम्म पुग्नु पर्ने बाध्यता हटेको छैन। ‘सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको मृत्युको कारण एउटै हो भन्न सकिने अवस्था हुँदैन’, तथ्यांक अधिकृत आचार्यले भने, ‘जनचेतनाको कमी, भौगोलिक विकटता, परम्परागत सोच, भौतिक संरचनाको अपर्याप्तताका कारण पनि महिलाहरू स्वास्थ्य सेवाको पहुँच भन्दा बाहिर छन्।’ साथै उनले अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको मातृ मृत्युदर न्यून भएको दावी गरे। केन्द्र र प्रदेश सरकारले कर्णाली लक्षित गरी सञ्चालन गरेको एयर एम्वुलेन्स पनि विपन्न परिवारका लागि उपयोगमा आउन सकेको छैन्। टाठाबाठा र नेताकै आफन्तका लागि प्रयोग हुने गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा करिब १३ जनाले एयर एम्बुलेन्सको उपयोग गरेका छन्।
तस्बिरहरु: डिलप्रसाद शर्मा/देश सञ्चार
चैत्र ७, २०७५ मा प्रकाशित